किन हुँदैन एउटै गोत्रमा विवाह ? अनिवार्य हेर्नुहोस् – Online Nepal
किन हुँदैन एउटै गोत्रमा विवाह ? अनिवार्य हेर्नुहोस्
March 14, 2020 669
गोत्र शब्दको अर्थ हो बंश र कुल । गोत्र प्रणालीको मुख्य उद्देश्य कुनै पनि ब्यक्तिको प्रचीनतम ब्यक्तिसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नु हो ।
उदाहरणको लागि कुनै पनि ब्यक्तिको गोत्र भरद्वाज हो भने त्यस्को अर्थ हो है त्यो ब्यक्तिको बंश वैदिक ऋषि भरद्वाजबाट शुरु भएको हो । अर्थात त्यो ब्यक्तिको जन्म ऋषि भरद्वाजको पीढीमा भएको हो ।
तपाइँलाई एकै गोत्रमा विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने चलनबारे तपाइँलाई थाहै होला । तर किन हुन्छ त यस्तो विवाद किन हुँदैन एउटै गोत्रमा विवाह गर्न विश्वामित्र जमदग्नि भारद्वाज गौतम अत्रि वशिष्ठ कश्यप सप्त ऋषिको नामले चिनिन्छन् । यसमा आठौं ऋषि अगस्तिका सन्तान ‘गौत्र’ भनेर चिनिन्छन् ।
Prevअस्पताल नगएरै गर्भमा छोरी छ कि छोरा सजिलै पत्ता लगाउने तरिका…
Nextपलले आँचललाई साथीबाट हटाइदिएपछि आँचलले फेरी आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर
धादिङ बाट बाहिरियो मुटु कपाउने खबर । 22 बर्षका श्रीमानले 20 बर्षकी अप्सरा जस्ती श्रीमतीलाई यस्तो गरे (हेर्नुहोस भिडियो)